कोरोना माहामारिको बेला भर्खरै झापाबाट आयो अर्को दुखद खबर ! – Online Nepal Site
काठमाडौंको कुपन्डोलमा घट्यो अपत्यारिलो घटना, ३ वोटा छोरा छोरीको आमाले जे गरिन ……..
जिप दुर्घटना हुँदा नव विवाहित जोडीसहित ४ जनाको मृत्यु
मध्य रातमा श्रीमतीले टाउको दुख्यो भन्दै चिच्याउन थालिन्, जुरुक उठेर बुढी भन्दा भन्दै श्रीमती ढलेपछि !
प्रिज्माले पहिलो पटक प्रेमका बारेमा खुलेर भनिन्, ‘मैले प्रेममा कहिल्यै पनि सम्मान पाइन् सबै भन्दा बढी घृ णा उनैलाई गर्छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
साउदीबाट आयो खुसीको खबर, अब कामदारलाई झनै सहज
कुमारीकेटी भनी बिहे गरि ल्याएकि श्रीमतिको पहिले नै ८ जना पुरुषसंग बिवाह भैसकेको थाहा पाएपछि…
नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि, अब सरकारले के गर्ला ?
माइतिघर जान्छु भनेर हिडेकी छोरी एक महिनादेखी बेखबर, आमाबाबुको रु’वाबासी (भिडियो हेर्नुस)
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना माहामारिको बेला भर्खरै झापाबाट आयो अर्को दुखद खबर !
काठमाडौँ। झापा गाउँपालिका १ लसुनाका नेपाली नागरिकले सशस्त्र प्रहरीलाई त’स्करको हातबाट बचाएका छन् । सोमबार राती भारतीय तस्करले सशस्त्र प्रहरीलाई घि’सार्दै भारत छि’राएका थिए ।
लसु्नाबासीका अनुसार नेपालभारत सी’मामा गस्ती गरिरहेका दुई जना सशस्त्र प्रहरीमध्ये १ जनालाई ४० जनाको समूहमा आएका भारतीयले घि’सार्दै १ सय मिटरभित्र पुर्र्यासकेका थिए । सशस्त्र प्रहरीले ब’चाऊ ब’चाऊ भन्दै गु’हार मा’गेपछि स्थानीयबासीले भारतीयको हातबाट ब’चाएको स्थानीय अगुवाले जानकारी दिए ।
सोहि समयमा हार्डवेयरका सामग्री नेपाल छिराउने योजना सहित भारतीयहरु आएको बुझिएको छ । गस्तिमा बस्ने सशस्त्रले सामान छिराउन नदिए उनीहरु माथि नै ह’मला गर्ने गरी योजनाको साथ भारतीय त’स्कर आएको स्थानीयको भनाई छ ।
केहि व्यक्तिले सामान नेपाल तर्फ छिराउन थालेपछि अन्यले सशस्त्रलाई घि’सार्दै भारत छि’राएको उ’द्धारमा सहभागी एक नेपालीले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, एकछिन ढिलो भएको थियो भने ठुलो दु’र्घटना हुने थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका एसपी रेशम थक्सुले सो स्थानबाट ठुलो परिमाणमा मोटरपार्टस र सुर्ति बरामद गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त’स्करले नेपाली भूभागमा त’स्करी गरेर ल्याएका सामान छरेका थिए । खेतबारी र बाटो छेउछाउमा सामान छ’र्नेहरुलाई सुरक्षाले त’स्करी गर्न नदिएको जानकारी दिए । त’स्करबाट सामान खो’स्दा घ’म्साघ’म्सीसम्म भएको उनको भनाई छ ।
टाघनडुब्बा बिओपीका प्रमुख सचिन प्रधानले नियन्त्रणको प्रयासमा ता’नाता’न भएको जानकारी दिए । उनले त’त्कालै फोन आएपछि आफुहरु पुगेको र ठुलो दु’र्घटना हुन नपाएको बताए ।
५० जनाभन्दा बढि नेपाली घ’टनास्थल पुगेर सशस्त्र प्रहरीको उ’द्धार गरिएको थियो । जिल्लामै धेरै त’स्करी हुने सी’माको रुपमा परिचित लसुना क्षेत्र मा भारतीयको दादागिरी नियन्त्रणमा अझै स’मस्या भइरहेको देखिएको छ । नेपालीसँगै मिलेर त’स्करी गरेपछि सुरक्षा संवेदनशीलता झनै बढेको छ । सो क्षेत्रबाट त’स्करीक गर्न विगतमा सुरक्षाबाटै सहयोग मिल्ने गरेको थियो ।
भदौ १५ गतेसम्म सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय (विज्ञप्तिसहित)
बैंश हुँदासम्म श्रीमती बनाए, प्यारालाइसिस भएपछि अलपत्र बनाएर वहराइनमा लुके श्रीमान (भिडियो हेर्नुस्)